Notre-Dame de Paris: Cusub cusub ee sababaha dabka - TELES RELAY
ACCUEIL » DIINTA • VIDEOS Notre-Dame de Paris: Wararka ku saabsan sababaha dabka
Notre-Dame de Paris: Wararka ku saabsan sababaha dabka
HADDII QOYSKA - Sidee buu u noqon karaa dab-damis aan cidhiidhi ahayn? Jawaabta su'aashan waxay qaadan doontaa wakhti, laakiin baarayaashu waxay horey u leeyihiin hogaamin.
Sababaha dabka ee Notre-Dame
Sawirrada dabka ee Notre-Dame
Qiimaynta iyo dhibbanayaasha dabka ee Notre-Dame
Aqalka iyo saqafka Notre-Dame, burburka
Qaybta Notre-Dame ayaa burburisay
Notre-Dame: gudaha dabka ka dib
Baaritaanka ayaa la furay si loo ogaado sababaha dabka ee Notre-Dame de Paris horay u socotay. Waaxda dambi-baarista ee Bilayska Garsoorka ee Paris ayaa bilaabay baaritaannada waxayna horey u qiyaaseen soddon qof. Sida laga soo xigtay xogta Parisiandabku wuxuu ka bilaabi lahaa saldhigga xayeysiiska weyn, halkaas oo ah goobta dib-u-dhiska oo weyn. Saraakiisha amniga ee la wariyay ayaa la sheegay inay u sheegeen in ay baarayaasha u sheegeen in diiradda dabka uu ku yaalay dhinaca geeska, ee dhinaca Seine, Dabka ayaa la soo sababi karaan by circuit gaaban nidaamka korontada, "yaabab oo ay ku jiraan wiishashka in ay ahaayeen ee ay soo rogeen, shuqulka," Booliska ayaa sheegay in kiiska u dhow wargeyska. CEO Europe dhismaha, mas'uul ka ah shaqada, si kastaba ha ahaatee, ku adkeystay on BFM TV in "dhammaan qalabka badbaadada iyo nidaamyada lagu ixtiraamo." Parisian waxay bixisaa macluumaad kale oo muhiim ah oo ku saabsan baaritaanka: 18h15, Isniinta, digniinta dabka ayaa lagu xayuubiyay muraayadaha kontoroolka, laakiin qaladka kombuyuutarku wuxuu muujin lahaa meel xun ee saraakiisha ammaanka. Marka ay ogaadaan dabka, waxay u badan tahay in ay lumiyaan wakhti si ay u arkaan ololka, waxay horay u sameeyeen 3m sare.
Sawirada Naagtayadu waxay burburisay ololka kadib
FADLAN KALA GO'O
Helo digniinaha nolosheena!
09: 16 - Anne Hidalgo, sida Emmanuel Macron, ayaa rajeynaya in Notre Dame dib loo dhiso sanado 5
"2024, Paris waxay soo dhaweyn doontaa adduunka munaasabadda ciyaaraha Olympic iyo Paralympic Games. Waa inaan sameyno wax walba si aan u hubino in cathedral Notre-Dame uu soo celiyay dhamaan quruxdiisa munaasabaddan, "ayuu yiri duqa magaalada Paris ee war saxaafadeedka. Xasuusnow sida ku qiyaas qiyaasta khabiirku, maaha in shaqadu lagama maarmayo in ka yar sanado 10. Laakiin Anne Hidalgo waxay rabtaa in ay kor u qaaddo waxyaabaha, sida Madaxweynaha Jamhuuriyadda. "Waxaan u baahannahay caawinaad kasta oo suurtogal ah, oo ah dhammaan doonista wanaagsan, si aan ula kulmo caqabadan weyn," ayay ku dartay hadalkeeda.
09: 11 - Hore ku dhowaad hal bilyan oo euro ayaa dib u dhiska Notre-Dame
Stéphane Bern, oo su'aal laga keenay subaxnimadii Arbacada ee ku saabsan RMC, ayaa ku faraxsanaa in musiibada Notre-Dame ay taabatay Faransiiska oo aad u badan, iyo deeqda ay ku baxdo in ay maal-galiso shaqada dib-u-dhiska. "Waxaan u arkaa, natiijooyinka kala duwan ee i soo diraya aasaaska saacadaha nus saac saacaddii nuska ah, in ay kor u kacdo, way kor u kacdaa. Waxaanu ku dhow nahay 900 millionkan subax. Waxaan qabaa inaan dhaafi doono calaamadda bilyan ee maalinta, "ayuu yiri.
09: 03 - UNESCO oo ka yara hanjabay Emmanuel Macron muddada dib u dhiska
Haddii Madaxweynaha Faransiiska ayaa aaminsan in ay macquul tahay in dib Notre Dame 5 sano, Ernesto Ottone, Ku-xigeenka Agaasimaha Guud ee UNESCO dhaqanka ayaa sheegay in ay tahay "goor hore in la qiyaaso xaddiga burburka uu keeno dabka. " Isaga, "sidoo kale waa mid waqti hore ah in la ogaado ilaa inta dib-u-dhiska uu qaadan doono." Si kastaba ha noqotee, "Faransiisku waa ka wanaagsan yahay diyaargarow dalal kale oo badan oo masiibo ka dhacday. Waraaqaha la cusbooneysiiyay, aruuriyayaashu waa kuwo la soo dhaafay. Sababtuna waa sababta ugu horeysa ee dib-u-dhiska uu noqon doono mid degdeg ah ".
09: 01 - "Waa suurtagal inaan marnaba garanayno cidda ka dambeysa dabka"
Ninka Parisien wuxuu soo xiganayaa maqaalkiisa ku saabsan horumarka baaritaanka ilaha baaritaanka taas oo aan dhab ahaantii rajo dhigeynin natiijada ka soo baxday in bilaysku awood u yeelan doonaan in ay soo qaataan dhamaadka baaritaanka. "Waa suurtagal inaan marnaba garanayno cidda ka dambeysa dabka," ayuu ka qoomameeyay. Waa in la sheegaa in baaritaannada dabka ay yihiin kuwa ugu adag.
08: 56 - Sidee loogu deeqaa dib u dhiska cathedral Notre-Dame?
Fondation pour le patrimoine ayaa boggeeda internetka ka dhigtay meel u gaar ah oo loogu talagalay dadka doonaya inay ka qayb galaan dhaqaale ahaan dib-u-dhiska Notre-Dame de Paris. Si aad uga qayb qaadato, waa inaad tagtaa on this page. Waqtiga qorista xarumaheeda, ururinta ayaa hore u soo ururisay 7 million euros.
08: 54 - Shaqooyin iyo khasnado badan oo Our Lady ayaa lagu gubay dabka
Haddii Mala'igtu qaali ah Our Lady, in taajkii qodxanta ahaa Masiixa iyo qaawanaanta ee St. Louis, ayaa ka koriyey Dabkii of katedraalka by damiska, toll ku meel gaarka lagu qiyaasay 5 10% ee shaqooyinka farshaxanka ee dhismaha ayaa la burburiyay. Tirada shaqooyinka wabiyada ee hareeraha nukliyeerka, kuwaas oo laga yaabo inay waxyeello soo gaadhay qiiqa iyo biyaha, weli waa la aasaasay tan, sababo nabadgelyo awgood, weli suurtagal maaha in la helo gebi ahaanba goobta. kaniisadda.
08: 53 - Dib-u-dhiska Notre Dame shantii sano ee la soo dhaafay, ma dhab baa suurtogal ah?
Intii lagu jiray cinwaankiisa telefishanka ee dabka ku dhuftay Notre-Dame Cathedral, Emmanuel Macron wuxuu sheegay inuu doonayo inuu dib u dhiso dhismaha shan sano gudahood. Anne Hidalgo, duqa magaalada Paris, ayaa sidoo kale sheegay in wax walba loo baahan yahay in la sameeyo "si loo soo celiyo Notre Dame Cathedral si aad u qurux badan" ee ciyaaraha Olympic 2024, oo lagu qaban doono caasimadda. Khubarada qaarkood ayaa ah kuwa aan rajo lahayn, maaddaama hawsha dib u dhiska ay balanqaaday in ay muhiim tahay. Stéphane Bern ayaa ka hadlay "40 sano" si loo soo afjaro dayactirka Notre-Dame. Agaasimaha Fikradda Notre Dame Foundation, Eric Fischer, ayaa ka hadlayay "tobanaan sano". "Dhibaatadu waxay noqon doontaa mid la tixgeliyo. (...) Marka la eego xajmiga shaqadiisa, dhammaan ganacsiyadu waa inay soo farageliyaan. Waxaa muuqata in uu ka shaqeynayo dhagax, najaaro, shaqo biraha, qalab farsamo, sida koronto, iftiin, saqafka ... ", Eric Fischer ayaa ku qiyaasay AFP.
08: 47 - Baarayaasha ayaa u adeegsan doona diyaaradaha aan la socon baaritaankooda
Sida la soo sheegay Le Parisien, bilaysku waxay u baahan yihiin inay qaataan sawirro iyo fiidiyowyo meelo kala duwan oo ku yaala kakooban si loo sii wado baaritaanka. "Diyaaradaha jihada hawlaha farsamada iyo tiknoolajiyadda ayaa duuli doona Notre-Dame si ay u sameeyaan natiijooyinka," ayuu yiri ilo ku dhow sahaminta wargeyska. Sawirada la qaaday ayaa markaa kadib u oggolaan doona in ay qayb ka mid ah dhismaha ka dhistaan ​​saddex cabbir, si ay u fuliyaan jilayaasha faahfaahsan. "Hadafku waa in la fahmo sida ay dabku u faafayaan, halkan ka joogaan," ayuu yiri khabiir ku takhasusay bilayska cilmiga ah ee warbaahinta.
16 / 04 / 19 - 23: 31 - Sawirada hawada ee Our Lady muujiyaan inta ay le'eg tahay burburka
DHAMMAADKA TOOSKA AH - Photos iyo videos qaaday by drones loo isticmaalo in ay ogaadaan inta uu la egyahay khasaaraha ay sababeen dabka ay ku dhaceen Notre Dame de Paris Habeenka 15 16 ka April.
Jawaabta @ClementSalviani @museecluny
Weli sawirro kale oo aan la qaadin ayaa lagu soo rogay Notre-Dame maanta, taas oo muujinaysa xaddiga dhaawaca shaxanka, daaqadaha, daaqadaha muraayadaha lagu qurxiyo. #our Lady Isku xir halkan si aad u daawato: https://gigarama.ru/notredame/
76 dadku waxay ka hadlaan
16 / 04 / 19 / 23 - 19: XNUMX - Emmanuel Macron wuxuu soo qaaday dabaqa wuxuuna ku hadlayey Notre-Dame
Emmanuel Macron ayaa dhab ahaantii ka hadlay Elysée caawa oo uu bilaabay hadalkiisa ku saabsan musiibada Notre-Dame, laakiin ma uusan dhicin ogeysiisyada la soo bandhigay caawa. "Dabka Notre-Dame de Paris wuxuu si qoto dheer u taabtay maskaxda iyo wadnaha Faransiiska iyo adduunka oo dhan," ayuu yiri madaxweynaha gobolka, isaga oo xusay in uu soo galey kaniisaddan la burburiyay oo uu markii hore aragtay "awoodda ay u abaabulaan, inay midoobaan si ay u guuleystaan". "Inta lagu jiro taariikhdeena, waxaan dhisay magaalooyin, dekadaha, kaniisadaha. Kuwii badnaa oo gubay, ayaa la burburiyey. Markasta, waan dib u dhisi doonaa, "ayuu yiri Macron. "Dabka of Notre-Dame wuxuu na xusuusinayaa in sheekadayadu marnaba joojinayso. Had iyo jeer waxaan leenahay caqabado si aan uga gudubno. "
16 / 04 / 19 - 23: 06 - In ka badan lacagtii deeqda ah ee 800 horay u soo qaadatay
Deeqo qoysaska hodanka ah, shirkadaha, bulshooyinka iyo deeqaha xitaa shaqsi: in ka badan 800 million horay loo sara kiciyey inuu dib u dhiska Notre Dame de Paris, maalintii dab halakeeyey qaybo ka mid ah cathedral ka dib. Apple, L'Oreal, Arnault, Pinault ama Total ayaa ka mid ah deeq bixiyayaasha.
16 / 04 / 19 - 22: 58 - Sawirrada weyn ee Notre-Dame ayaa lagu daryeelayaa Louvre
Wasiirka dhaqanka, Franck Riester, ayaa sheegay in "sawirada weyn ee Notre-Dame de Paris aysan lahayn waxyeello la xidhiidha dabka, laakiin halkii qiiqa", isaga oo intaas ku daray "in laga saaro laga soo bilaabo jimcaha oo si haboon oo ammaan ah loogu geeynayo kaydka Louvre halkaas oo ay uumi gali doonaan oo la soo celin doono ". Waxay taageeri doonaan sheekooyinka muusikada, oo caan ku ah khibradahooda dib u soo celinta.
16 / 04 / 19 / 22 - 42: XNUMX - Dabkii ee Notre-Dame ayaa ka tagi lahaa saldhiga ok
sida laga soo xigtay Le Parisien, laba ilaaliye ammaan ah oo ka socda kaniisadda, kuwaas oo ay maqleen baarayaashii, ayaa lagu soo warramey in ay arkeen dabka ugu horreeya oo ku saabsan seddex mitir oo sare ee saldhigga Notre Dame. Waxay markaas ka qaadi lahaayeen wiishka si ay u arkaan dabka, laakiin ololku horay ayuu noolaa, waxna ma qaban karin. Weli wali waa sida ay wararku sheegayaan, digniinta dabka ayaa ka digtay wakiilada dab ka 18h15, laakiin bugta kombiyuutar ayaa sheegi lahaa meel qalad ah. Sidaa darteed baaritaanku waa inuu go'aan ka gaaraa in haddii dhibaatadani ay dib u dhigto waxqabadyada dab-demiska.
16 / 04 / 19 - 22: 28 - Sawirada dhaawaca Notre-Dame
BFM TV ayaa daabacday sawirada Notre-Dame de Paris kaas oo aan aragno dhibaatada ka dhalatay dabka dhexdiisa. Mid ka mid ah ayaa halkaas ku arki doona gaar ahaan godka daloolka ee saqafka iyo qashin badan oo ku soo boodaya dhulka oo ay sababtay ololka.
Halkan waxaa ku yaal sawirro dhaawacyada ka soo baxa kaniisadda
82 dadku waxay ka hadlaan
16 / 04 / 19 - 22: 06 - Parisians iyo dalxiisayaal isugu yimaada Place Saint-Michel
Dad badan oo reer galbeed ah iyo dalxiisayaal ayaa hadda ku uruuraya goobta Saint-Michel, oo ka soo horjeeda Ile de la Cite halkaas oo Notre-Dame ay ku taal, maalinta ka dambeysa dabka oo burburay qayb ka mid ah kaniisadda.
Notre-Dame de Paris: Dad badan oo Parisians ah iyo dalxiisayaal isugu yimaada goobta Saint-Michel
123 dadku waxay ka hadlaan
16 / 04 / 19 - 21: 55 - 33 qof oo markhaatiyaal ah oo ay maqleen baarayaasha Talaadadii
Sida laga soo xigtay xafiiska xeer ilaaliyaha, waxaa la arkay 30 askari oo ka mid ah markhaatiyaasha booliska oo baaritaan ku sameeyay dabkii ka kacay kaniisadda Notre-Dame Cathedral, oo sii wadi doona dhegeysiga Arbacada. Marqaatiyaalkan waa shaqaale shirkado ah oo ku yaal goobta dhismaha iyo xubno ka tirsan shaqaalaha mas'uul ka ah ammaanka ee cathedral.
16 / 04 / 19 - 21: 46 - Taariikhyahanada Farshaxanimada Fanka iyo Xirfadayaasha farshaxanka
Iyadoo Faransiiska Info-ka ay soo gudbinayaan Talaadada, taariikhyahanada taariikhiga ahi waxay ka xanaaqeen waxa ay ku dhaleeceynayaan inay yihiin cillad halis ah oo ku aadan dayactirka Notre-Dame Cathedral. "Waan ka fogaan karnaa taas," Judge Didier Rykner, oo ah tifaftiraha tifaftiraha majaladda Art Tribune, ayaa sidaas yidhi. Iyo in la caddeeyo cadhadiisa: "Waa dabka oo aad u badan! (...) Waxaa hore u jiray dabaqyo taxane ah oo noocaan ah. Daawooyinka rijeetada loogu talagalay oo ku saabsan dhismayaasha taariikheed ayaa ku filnayd. Waxaan waydiistay sharci aan waxba qaban. Haddii jidka loo cayimay, waa inay noqotaa mid lagu magacaabo ". Alexandre Gady, taariikhyahanada taariikhiga ah, ayaa tilmaamaya la'aanta ilaha dhaqaale ee loo qoondeeyey dhismayaasha taariikhiga ah. "Waxaan dhihiay sanado badan oo miisaaniyadeed ee taariikhda taariikhi waa mid aad u hooseeya, taas oo ah isbeddel ku habboon laakiin hal dhibic, waxa uu noqonayaa dhibaatooyin xagga ammaanka ah", ayuu ku dooday, in lagu xukumo xitaa haddii Our Lady of Paris noqon doonaa "dayactiray", "waan ka lumay".
Faransiiska ayaa laga yaabaa inuu seego dhagxaanta
Maalintii dabkii dabkii burburiyay qayb ka mid ah Notre-Dame de Paris, waa waqtigii lagu fikiri lahaa dib u dhiska dhismaha cathedral. Haddii deeqdani ku darsato malaayiin euros, Faransiiska waxaa laga yaabaa inuu wajaho "shaqo la'aan (...) stonemasons, najaarada iyo saqafka," ayaa uga digay xoghayaha guud ee saaxiibada Duty Jean -Claude Bellanger, oo ah AFP. "Waayo, goobta u dhiska u baahan tahay in aan ka wastaadyo arday September 100, nijaarradii iyo roofers 150 200 qortaan," ayuu ayuu yiri. Cabsida ayaa ah, sida laga soo xigtay isaga, in "tayada buuggan yar ayaa lagu qiimeeyaa oo wax yar soo jiidanaya".
16 / 04 / 19 - 21: 13 - Soo koobitaan cajiib ah oo ku saabsan burburinta Notre-Dame
Jacques Chanut, madaxweynaha Federation Faransiis ee Dhismaha iyo Madaxweynaha Commission Growth of MEDEF ee Paris ayaa sheegay in on account ay Twitter in mid ka mid ah xubno ka tirsan ururka Historical taxadiri Celinta Shirkadaha laga helay burburka of ciyey kor oo ah fallaadhaha Notre-Dame. "Dareenkiisa wuxuu ahaa mid wanaagsan! Waad ku mahadsantihiin dhismeyaal noocan oo kale ah oo ku saabsan ballanqaadkeena: Faransiiska yaqaan-sida uu u socdo, "ayuu ku yiri Jacques Chanut.
Aamini karin! Mid ka mid ah xubnahayaga @GMHistoriques waxaa laga helaa qashinka ka soo horjeedka sare ee foornada #our Lady Dareenkiisuna wuu fiicnaa! Waad ku mahadsan tihiin dhismayaasha miraha dabiiciga ah ee loogu talagalay balanqaadkooda: Faransiiska yaqaan-sida uu u socdo. #ReconstruireNotreDame
3 601 dadku waxay ka hadlaan
16 / 04 / 19 - 21: 04
Ka mid ah Our Lady of items in la soo taabtay, sidaas darteed waxaa jira saddexda qaybood ee cathedral ee, ay ka mid yihiin dheeraad ah oo ka kooban shan teebabka, kulan oo 109 8 000 dhow tuubooyinka. Waa Monseigneur de Benoist Sinety, guud vicar oo ka mid ah Archdiocese ee Paris, kuwaas oo uu sheegay in xubnaha la "ku dhowaad gebi ahaanba la wada baabbi'iyey" sanadihii la soo dhaafay ka dib markii 600 dhismaha. Laakiin wasiirka dhaqanka wuxuu ahaa mid aad u fiicnaa Talaadadii. Waxaa laga yaabaa in qayb ahaan la badbaadiyey, hase yeeshee waxyeello weyn ayaa sabab u ah kuleylka iyo biyaha oo laga saaro tuubooyinka dabka.
Sababaha saxda ah ee dabka ee Notre-Dame de Paris lama garanayo marxaladdaan, laakiin dhismaha wuxuu ahaa shaqo dib u soo celin markii uu dabku ka kacay, dabcan waxaa ka dhacay qiiqa saqafka dhismaha, hareeraha 18h50 Munaasabadan 15 april 2019. Dabdemiyeyaasha Paris ayaa markii ugu horreysay sheegay in dabka 'Notre-Dame Fire' ay dhici karto in lala xiriiriyo dayactiradan. Tani waxaa kale oo ay tilmaameen afhayeenka Notre-Dame. Inkastoo baaritaan lagu furay garoonkii Faransiiska si loo ogaado duruufaha dabka, oo loo dhiibay bilayska garsoorka, waa jihada shilalka ah ee mudnaanta leh. "Waxaan si cad u cadeeyay in dowladdu waxba ka qabanayso tallaabo mutadawacnimo ah," ayuu yiri xeer ilaaliyaha Jamhuuriyadda Paris Talaadadii. Dabku wuxuu ka bilaabi lahaa xayndaab dhagax ama saqafka cathedral.
Sawirrada dabka ee Notre Dame, muuqaal cajiib ah
Laga soo bilaabo bilawga dabka ee Notre-Dame de Paris, sawirada riwaayadda ayaa ku wareegay shabakadaha bulshada, ka hor intaan wakaaladaha warbaahintu qaadin. Dhamaan fiidkii, sawirada dabka ee Notre-Dame de Paris waxay muujinayaan olol aad u weyn oo ka soo baxaya saqafka dhismaha, daruur qiiq ah. Dhumista Notre Dame ee laftiisa lafteeda ayaa ahayd dhacdo kale oo hodan ku ah sawirro muuqaal ah. Talaado, sawirro cusub ayaa la soo bandhigay AFP, sawirro lagu qaaday gudaha kaniisadda, oo aan aragno xaddiga dhaawaca ee nuuca. Soo hel sawirada dabka ee Notre-Dame de Paris.
Dabku si khamaar uma uusan sameynin dhibbanayaal halis ah, laba askari oo bilays ah iyo dab-damiye ayaa si fudud u dhaawacmay, sidaasi waxaa sheegay mas'uuliyiinta Talaadadii 16 April. Dabkii ee Notre-Dame de Paris wuxuu dhacay maalintii ugu horeysay ee Dabaaldegga Toddobaadka Quduuska ah ee hogaaminaya Easter, fasaxa ugu muhiimsan ee Masiixiga. Ku saabsan 13 malaayiin dalxiisayaal ah ayaa booqanaya Notre-Dame de Paris sanad walba.
Aqalka iyo saqafka Notre-Dame, waxyeelo weyn
Sida laga soo xigtay warbixin hordhac ah oo ku saabsan khasaaraha ugu Notre Dame ee Paris, "ayuu kaynta", ie alwaax in ay taageeraan saqafka, ka horrantii qarnigii saddex iyo tobnaad, oo gabi ahaanba burburtay, sida Jestkii ee cathedral in s ayaa isku dhacey. Mid ka mid ah munaaradaha ayaa la dhuftey, dabkuna wuxuu waxyeeleeyay gudaha dhismaha. Falaashku wuxuu ku jiraa gudaha gudihiisa, isaga oo ka tegaya dalool daloolka ah ee saqafka dhismaha. Miisaaniyadda jaangooyuhu waxay ka shaqeysaa hareeraha nukliyeerka, taas oo laga yaabo inay waxyeello soo gaarto qiiqa iyo biyaha, in la dhiso. Dhinaca kale, kharashka kakooban, walxaha xasaasiga ah, waxay ahaayeen kuwo ammaan ah xajinta. Raadiyaha kiniisadda Notre-Dame de Paris ayaa sheegay in fiidnimadii Isniinta in taajkii thorns iyo tuubada St. Louis lagu badbaadiyey. Talaado, waxaan bartay mucjiso ah in cayayaanka lafdhabarta ee Our Lady ayaa laga helay burburka, waxyeello, laakiin "restorable". Waxaa ku jira waxyaabo aan qiime lahayn. Heritage Foundation waxay bilowday Talaadada "ururinta qaranka" ee Notre-Dame de Paris. Iyadoo deeqo badan oo maxaabiisnimada ka weyn (Pinault, Arnault, Bettencourt), wadarta kiciyey noqon kartaa ku dhowaad hal bilyan oo euros.
Qaybta Notre-Dame waxa burburiyay dabka
vicar guud ayaa ka mid ah Archdiocese ee Paris, Archbishop of Sinety Benoist, ayaa sheegay in hay'adda ugu weyn ee Cathedral ee, mid ka mid ah alaab Our Lady, waxay ahayd "ku dhawaad ​​gabi ahaanba la burburiyay", laakiin wasiirka dhaqanka ee ' waxaa lagu muujiyay rajo dheeraad ah. Waxaa laga yaabaa in qayb ahaan la badbaadiyey, hase yeeshee waxyeello weyn ayaa sabab u ah kuleylka iyo biyaha oo laga saaro tuubooyinka dabka. Ma cadda in waxa laga badbaadin karo qalabka iyo waxa dib loo cusbooneysiin karo. Tani waa shey gaar ah oo cajiib leh, oo ay ku jiraan dhuumo 8000 ku dhow, Keybelayaasha 5 iyo ciyaaraha 109. Qaybtii koowaad ee taariikhda qarnigii shan iyo tobnaad, inkasta oo qalabkii uu gaadhay qaabkiisii ​​ugu dambeeyey oo keliya qarnigii siddeed iyo tobnaad.
Gudaha gudaha Notre-Dame de Paris
Sawirada AFP ee sawirrada gudaha ee Notre-Dame Cathedral ka dib dabkii burburay saqafka. Haddii meesha allabarigu si mucjiso ah loo ilaaliyo, masiibadu waxay burburisay qeybta dhan ee saqafka weyn ee nave weyn, oo burburay. Daaqado badan oo muraayado ah ayaa la burburiyay ama aad u burburay, laakiin koonfurta kicinka ayaa la ilaaliyay.
Sawirada burburka gudaha Cathedral Notre-Dame de Paris #AFP @AFPphoto Philippe Wojazer
332 dadku waxay ka hadlaan
Notre-Dame de Paris, 850 sano oo taariikh ah
Inta badan maqaalkii akhriska - Notre-Dame de Paris: muranka dabka> Arag news